News – အောငျနိုငျသူ
Aung Naing Thu | October 22, 2021
ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို ရောင်းပြီး ထားရစ်ခံရတဲ့ ရာပေါင်းများစွာသော ကလေးများကို မွေးစားခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး လက်ရှိဘဝက မချမ်းသာပါပေမယ့်လည်း Giap Thi Song Huong လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေးက သူမပျော်ရွှင်မှုနဲ့အညီ ရာနဲ့ချီတဲ့ကလေးတွေကို သူ့လက်နဲ့ မွေးစားပြီး ဂရုစိုက်နေဆဲပါနော်။Vietnamnet သတင်းစာက အသက် ၁၈ နှစ်မှစပြီး မစ္စ Huong က သူမရဲ့
အသားတု ကို ဘယ်ကနေ ရတယ်လို့ထင်လဲ…? အသားတုက ကျွန်တော်တို ဒီနိုင်ငံမှာတော့ တော်တော်လေး အသုံးတွင်ကျယ်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်နော်။လမ်းဘေးတုတ်ထိုးဆိုင်လေးတွေ၊အကင်ဆိုင်လေးတွေကစပြီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးလေးနဲ့ ချက်ထားတဲ့အသားတု ဟင်း ၊ အသားတုဗလချောင်ကြော်လေး စသည်ဖြင့် အသုံးတွင်ကျယ်လှတာပါ။အသားတုကို မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမကအာရှမှာတော်တော်များများ စားကြပါတယ်နော်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတေ့ာသက်သက်လွတ်ဟင်းပွဲတွေမှာ အများဆုံး တွေ့မြင်ရတတ်ပါသတဲ့။လူတိုင်းနီးပါးကြိုက်တဲ့အသားတုကို ဘာနဲ့ လုပ်ထားတာလဲဆိုတာရော တွေးကြည့်ဖူးလား ? မသိသေးဘူးဆိုရင် ပြောပြမယ်နော်။
အာဆီယံ အစည်းအဝေးပွဲကို နိူင်ငံရေးနှင် မသက်ဆိုင်သူ အနေဖြင့် တတ်ရောက်ခြင်တယ် ဆိုတဲ့ အေးနေဝင်း အေးနေဝငိးဆိုရင် မသ်ိတဲ့ သူ တော်တော် ရှားမယ် ထင် ပါတယ်။အေးနေဝင်း ကတော့ အာဆီယံ အစည်းအဝေး ပွဲကို နိူင်ငံ ရေးမသက် ဆိုက်သူ အ နေဖြင့် တက်ရောက် ချင်တယ်လိုို့ ဆိုပြီးတော့ အေးနေဝင်း
အသက်တစ်ချောင်း ကယ်နိုင်ဖို့ ခြေထောက်တစ်ချောင်း စတေးခံခဲ့သူ လွန်ခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့ (ဇူလိုင် ၆ရက်ေေ န့က တရုတ် နိုင်ငံ စီချွမ်ပြည်နယ်မှာ အခုလို ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ အကြား အာရုံ ချို့တဲ့နေတဲ့ အသက် ၆၅ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ အသက် ကို ကယ်တင်နိုင်ပေးခဲ့သော ရွှီချန်ခိုင် (Xu Qiankai)
ပန်းခြံထဲ လမ်းလျှောက်နေရင်း အဝါရောင် ကျောက်တုံးလေးတစ်တုံးကို တွေ့လို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအားခေါ်ပြလိုက်သော အခါ…
ပန်းခြံထဲလမ်းလျှောက်နေရင်း အဝါရောင်ကျောက်တုံးလေးတစ်တုံးကိုတွေ့လို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအားခေါ်ပြလိုက်သော အခါ… လောကကြီးရှိ အချို့သောသူများဟာ လှံထမ်းလာတာကိုပဲမြင်တယ် ကံထမ်းလာတာကျ မမြင်နိုင်ပူးဆိုတဲ့ စကားပုံလေးအတိုင်း ကံကောင်းမှုတစ်ခုကြောင့်ဘဲ နေ့ချင်းညချင်း ကြီးပွားချမ်းသာလာနိုင်တတ်ကြတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ယခုအခါတွင်လည်းဘဲ Noreen Redbergအမည်ရှိသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးကတော့ ခရီးသွားရခြင်းကို ဝါသနာပါပြီးတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့်အတူ အမေရိကန်နိုင်ငံ Arkansasရှိ နာမည်ကြီး Crater of Diamonds State
သင်ကံ‌ကောင်းချင်တယ် ဆိုရင် ကျင့်ကြံနေထိုင်သင့်တဲ့ နည်းလမ်း (၇) မျိုး သင့်ဘဝမှာ တကယ်ကံကောင်းချင်တယ်ဆိုရင် ပြုမူနေထိုင်သင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ပြောပြပေးချငပါတယ်။အဲတာတွေကတော့ 1 Live in the present ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲ ကိုယ့် စိတ်ကို နှစ်ထားပါနော်။ သင့်မှာရှိတာ ပစ္စုပ္ပန်တခု ထဲ ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ အတိတ်ဆိုတာ ပြီးသွားပြီ အနာဂတ်
ပုံပြင်တွေထဲကလို တကယ့် လက်တွေ့ကမ္ဘာက ရွှေထွက်တယ်ဆိုတဲ့ သစ်ပင်အကြောင်း ငယ်ငယ်တုန်းက ပုံပြင်ထဲမှာတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အပင်တွေဆီက ခူးယူကြတာ ကြားဖူးကြမှာပါနော်။ ရှေးတုန်းကလည်း ပစ္စည်းတွေသီးတဲ့ ပဒေသာပင် ဆိုတာ ရှိခဲ့တယ်လို့ လူကြီးတွေက ပြောဖူးကြတာပ့။ ကဲအခု ကတော့ ပစ္စည်းတွေ သီးတဲ့ အပင်တွေ အကြောင်းတော့ မဟုတ်ပေမယ့်လည်း ရွှေထွက်တဲ့ သစ်ပင်တွေအကြောင်း
ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ တစ်ခါမှ ရေးမချိုးဖူးသော အမျိုးသားရဲ့ ဘဝ နောက်ကွယ်က ဝမ်းနည်းစရာ အကြောင်း
ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ တစ်ခါမှရေးမချိုးဖူးသောအမျိုးသားရဲ့ဘဝ နောက်ကွယ်က ဝမ်းနည်းစရာ အကြောင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ခန့်က Ludvik Dolezals အမည်ရှိတဲ့ ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှ အိမ်ခြေမဲ့အမျိုးသားတစ်ဦး ဟာ ညစ်ပတ်မှုကြောင့် ရုတ်တရက်နာမည်ကျော်လာခဲ့ပြီးတော့ ဥရောပမှာ အညစ်ပတ်ဆုံးလူသားလို့ပင် ချီးမြှောက်ခံခဲ့ရတာပါ ။ အသက် ၆၀ ခန့်ရှိ မစ္စတာ Ludvik ဟာ Prague မြို့အရှေ့ဘက်
ဓလေ့ ထုံးတမ်းအရ နွားကျင်ငယ်ရည်နှင့် မျက်နှာသစ် ခေါင်းလျှော်ကြရသော ထူးဆန်းသည့် မျိုးနွယ်စု
ဓလေ့ ထုံးတမ်းအရ နွားကျင်ငယ်ရည်နှင့် မျက်နှာသစ် ခေါင်းလျှော်ကြရသော ထူးဆန်းသည့် မျိုးနွယ်စု လူသားတိုင်းကတော့ သူတို့မျိုးနွယ်စု အလိုက်ကို ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးစံသည် လည်း အမျိုးမျိုးကွဲပြားပြီးတော့ ထို ဓလေ့များကို ယုံကြည်စွာ လိုက်နာ ကျင့်သုံးပြီးတော့ နေထိုင် တတ်ကြတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ အခုလည်းဘဲ အာဖရိက ရှိ Mundari အမည်ရှိသော
နှုတ်ခမ်းနီဖိုး မကုန်အောင်ဆိုပြီး တက်တူးထိုးလိုက်ရာကနေ ထင်မှတ်မထားတာဖြစ်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်း အမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့ အလှအပကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် ငွေရင်းနှီးခြင်းက အမျိုးသမီးအများစုရဲ့ မရှိမဖြစ်ပြုလုပ်လိုတဲ့ အရာဆိူလည်း မမှားပါဘူးနော် ။ ထို့ပြင်ကို ယနေ့ခေတ်ကဲ့သို့ အလှအပလုပ်ငန်းက လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်မှာ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာက ယခင်ကထက် ပိုမိုလွယ်ကူလာခဲ့ပါတယ်နော် ။ ဒါပေမဲ့ လှပအောင်ပြုပြင်ခဲ့ရာကနေပြီးတော့ တချို့လူတွေက ပိုပြီးတောင်